सिन्धुका हेडसर अबको सभामुख - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ सिन्धुका हेडसर अबको सभामुख
Sindhu Khabar बुधबार, २०७६ माघ ८ / १७:२८
चौतारा, ८ माघ ।
लामो समयको रस्साकसीपछि सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ बाट विजयी भएका साँसद अग्नीप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध भएका छन् । मंगलबार सभामुख पदका लागि सापकोटाको एकल उम्मेद्वारी परेपछि सभाम्ुखमा निर्विरोध भएका हुन् । सभामुखको घोषणा भने १२ गते मात्रै हुनेछ । सभामुखका लागि उम्मेद्वारी दिनुअगावै चर्चामा आएका सापकोटाको राजनीतिक जीवन यस्तो छ ।
२४ फागुन २०१४मा सिन्धुपाल्चोकको साविक कुविण्डे गाविस (हाल चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–४)मा आमा तीलमायाको कोखबाट जन्मिएका हुन् अग्नीप्रसाद सापकोटा । श्रीमती र तीन छोरा रहेको सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका छन् ।
उच्च शिक्षासँगै अध्यापन सुरु गरेका सापकोटा सिन्धुपाल्चोकमा कुशल हेडसरका रुपमा परिचित छन् । अहिले पनि सापकोटालाई जिल्लावासीले अग्नी सरको सम्बोधन गर्छन् । साँगाचोकको जनजागृति माविमा उनले प्रधानाध्यापक चलाएका थिए । उनले १५ वर्ष अध्यापनमा आफ्नो समय बिताएका थिए ।
शिक्षणसँगै उनले राजनीतिमा हाम फाले । २०३५सालमा नेकपाको चौथो महाधिवेशनमा पार्टी सदस्यता लिए पनि विद्यार्थी राजनीति भने उनले २०२९ सालबाट नै सुरु गरेका थिए । २०३७ सालमा शिक्षक संर्घष समितिको सदस्य बनेका सापकोटा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको जिल्लाउपाध्यक्ष, अध्यक्ष हुँदै संगठनको केन्द्रीय महासचिव र उपाध्यक्षसमेत बने । शिक्षण २०४८ सालमा छाडेपछि सापकोटा सक्रिय राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनी २०४९ सालमा संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए ।
राजनीतिमा क्रियाशील सापकोटा २०५१ मा भएको नेकपा (एकता केन्द्र)को केन्द्रीय सदस्य, सोही वर्ष नेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय सदस्य भए । सशस्त्र द्धन्द्ध सुरु भएको गाउँ अग्नीप्रसादकै गाउँ हो । उनको जन्मगाउँ कुविण्डेबाट द्धन्द्ध सुरु भएको हो । द्धन्द्ध सुरु भएसँगै नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य रहेका सापकोटा अन्य नेतासँगै २०५२ माघबाट भूमिगत भएका थिए ।
२०५२ फागुनबाट सुरु भएको सशस्त्र युद्वको नेतृत्वमा उनी उभिए । भूमिगतकालमा पूर्वी उपक्षेत्रिय व्यूरो इन्चार्जको नेतृत्व उनका काँधमा आएको थियो । २०५७ मा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनवाट पोलिट्व्युरो सदस्यमा निवार्चितमा उनी चयन भएका हुन् । भूमिगत कालमा पार्टीभित्र निकै ठाउँमा नेतृत्व सम्हालेका सापकोटा २०५८ सालमा पार्टीबाट गठन गरिएको तीन सदस्यीय वार्ता टोलीमा रही सरकारसँग वार्तामा सहभागी भएका व्यक्ति हुन् ।
सरकारसँग बार्ताका क्रममा बेलाबेलामा युद्धविरामको घोषणा हुन्थ्यो । फेरि भंग हुन्थ्यो । यो क्रममा सापकोटा धेरै ठाउँमा अग्रपंक्तिको मोर्चा सम्हालेका थिए । २०६२ चैत १४ गते सिन्धुपाल्चोक ठोकर्पामा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट प्रहार गरेको गोली ३ ठाउँमा लागि सापकोटा गम्भीर घाइतेसमेत भए । राजनीतिक जीवनका अनेक आरोह अवरोह झेलेका अग्नीप्रसादले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा उपत्यका वरिपरिका जनतालाई मुख्य जिम्मेवारी लिई जनआन्दोलनमा परिचालनको नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
जनआन्दोलनपछिको शान्तिप्रक्रियापछि २८ चैत २०६४मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (माओवादी)बाट उम्मेद्वार बनेका थिए । त्यतिबेला उनले निकटतम प्रतिद्धन्द्धीभन्दा २० हजार बढी मत प्राप्त गरे । त्यतिबेला सापकोटा देशभरि सर्वाधिक मत ल्याउने सातौं उम्मेद्वार बनेका थिए । विजयीपछि उनले संविधानसभा सदस्यका रुपमा संविधान निर्माणमा सक्रियतापूर्वक क्रियाशाीलतासमेत देखाएर आफूलाई कुशल राजनीतिज्ञका रुपमा उभ्याए ।
निम्न आयस्रोत भएको परिवारमा जन्मिएका सापकोटा २०६८ वैशाख २२ गते नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसपछि २०७० मा भएको अर्काे संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिए । सिन्धुपाल्चोक–२ वाट दोस्रो पटक संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित सापकोटा तत्कालीन बागमती अञ्चलबाट तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट विजयी एकमात्र सांसद हुन् ।
२०७३ मा उनी नेपाल सरकारको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री बने । २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ बाट विजयी बने । यो सँगै तीनपटक संसद सदस्यमा विजयी भएर सापकोटाले ह्याट्रिक गरे ।
राजनीतिक जीवनकै क्रममा विस.ं २०६९ साल माघमा भएको एकीकृत नेकपा (माओवादी) को हेटौडा महाधिवेशनवाट पोलिट्व्युरो सदस्य भएका सापकोटा २०६९ साउनमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता बने ।
पार्टीभित्र शालीन नेताका रुपमा चिनिइने नेता सापकोटा २०७१ मा भएको विराटनगर सम्मेलनवाट स्थायी समिति सदस्य बनेका थिए । २०७३ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कार्यालय सदस्य भएका उनी २०७५ मा साविक एमाले र माओवादीको एकता भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति सदस्य भएका थिए । लामो समय सक्रिय राजनीति गरेका सापकोटा अहिले सभामुखमा निर्विरोध भएका हुन् ।